Iyo yakanakisa tsika yekudyara kuchengetedza | Ehupfumi Zvemari
Iyo yakanakisa tsika yekudyara kuchengetedza
Takatarisana nezvingaitika mu 2018 Vazhinji vanoongorora zvemari vanotenda kuti chiitiko ichi chinopera nechiratidzo chakanaka. Kunyangwe isiri pasi pekusimba kweimwe yapfuura kurovedza muviri. Saka kuti rimwe rematanho anogona kuzadzikiswa ari mu 11.000 points. Chero chinhu chakapfuura icho chaizotorwa sechishamiso chidiki uye chikaonekwa semubairo kune vashoma nepakati varimi. Chero zvazvingaitika, chimwe chezvinangwa zveizvi chinofanirwa kunge chiri chekugadzira chakaringana uye chakaringana mari yekudyara yezvingaitika mumwedzi inotevera. Kubva pane ino maonero ekudyara, akateedzana mazano epanguva ino haazombokuvadza.
Tinofanira kuyedza nepese patinogona kugadzirisa mari yekudyara iyo zvakasiyana. Kunyanya, kuitira kuti shanduko yemisika yemari haina kudikanwa nevashambadzi. Saka kuti nenzira iyi, iwe uri muchimiro chiri nani chekuzvidzivirira kubva pane zvingangoitika kurasikirwa nemisika yemari. Nekuti pakupera kwezuva zvazviri ndezvekuti muyero weakaundi yako yekutarisa hautambure kubva kune rimwe kana akawanda mashandiro asina kunyatsorongwa mugore rino rakaomarara. Panenge chero chinhu chingaitika.
Munguva pfupi yapfuura kubvira International Monetary Fund (IMF) yakasimbisa kuti 2018 ichave iri gore rekupedzisira rekugadzirisa hupfumi. Kusvika padanho rekuti ichizosvika zvikamu zvemagariro izvo zvisati zvasvika kune zvakadzama maungira ekufora kwakanaka mukukura kwenyika dzese. Ichi chinhu, mukufungidzira, chinofanirwa kusimudzira huwandu hwakakwira mumwedzi iri kuuya. Asi sekuziva kwako, musika wemasheya haufungidzike uye unotarisira zviitiko zvehupfumi zvinogona kukura mukati memwedzi mishoma kana kunyangwe makore. Izvi zvagara zviri chiitiko kwemakore mazhinji. Uye saka zvicharamba zvichiitika, nekuda kwemusika wemasheya ndiwo musika wekutengesa uye hapana chikonzero chekugara pahukama uhwu nenyika inogara yakaoma yemari.
1 Securities: invest by dividend
2 20% kukura kugona
3 An Investment gore rimwe pamberi
4 Zvimwe zvekushamisika muna 2018
5 Mutsetse bhizinesi mitsara
6 Yakawanda inosara tsika mumusika wemasheya
Securities: invest by dividend
Imwe yemaitiro ekutanga aunogona kushandisa kuita kuti zviwanikwa zvako zviwane pundutso gore rino mubhadharo wemadividheni muzvikamu zveSpain muna 2018. Pasi pemipimo iyi, mikana yakawanda yakavhurika kwauri inopa hunhu hunoenderana. Mupfungwa iyi, kumwe kubheja kwakachengeteka kwauinako kubva ikozvino zvichienda pasina mubvunzo Endesa. Iyi kambani inotarisira kugovera zana muzana yemubhadharo wakawanikwa nezvinoenderana nekufungidzira kweRenta 100 yaizosvika ku7,2%.
Imwe yesarudzo dzinonakidza kwazvo kana iwe ukatevera iyi nzira inochengetedza ndeye Mediaset Spain. Iyo ine 6,2% purofiti pamugove uye bhizinesi modhi inoshanda chaizvo munyika medu. Kunze kwezvikumbiro izvi makambani ese emagetsi munyika anounza kudzoserwa pamari yemugovana pakati pe5% ne6,50%. Izvo ndezvekuwana iyo yakamisirwa mari mukati meiyo kusiana pasina kubatanidza chero kuyedza pane kwako chikamu. Nekuti iwo mubhadharo iwe waunowana mune yakatarwa uye yakavimbiswa nzira gore rega. Zvisinei nekushanduka kwemitengo yavo mumisika yemari.
20% kukura kugona
Chimwe chezvinangwa zvekutanga gore rino kusarudza masheya ane kukura kwakanyanya mukuita purofiti. Kubva kuna Ahorro Corporación vanokurudzira mamwe maitiro anoenderana nezvinodiwa izvi. Kusvika padanho rekuti inivhesitimendi femu mibairo yegore rino razvino a 21% inogona kune yayo portfolio neAcerinox, Enagás, Gasi Natural, Mediaset, Meliá, Repsol uye Telefónica. Muzviitiko zvese, izvi ndezvemari yepamusoro-soro zvirevo zvakadzikama kupfuura zvese zvekuchengetedzwa pamusika weSpanish unoenderera. Naizvozvo, ivo vanokupa iwe chivimbo chakanyanya kana uchitora chinzvimbo muzviito zvavo.
Iri zano raizoshanda kugadzirisa portfolio ye tsika dzakadzikama kwazvo. Hazvishamise kuti angangoita ese akamiririra zvikamu zveSpanish stock stock yaizomiririrwa. Uye zvakare, iwe haugone kukanganwa kuti zvikwereti zvinomirirwawo mune zvese zvirevo. Nemubhadharo wemadzimai unopihwa kune vashoma nevapakati varimi mune ino nguva nyowani yatinonyudzwa. Kubva pane iyi nzira, iwe unozogona kuzvidzivirira iwe zvirinani zvirinani kubva kungozi dzinogona kuoneka mune ino nguva. Iko hakuna nzvimbo yekufungidzira kana diki uye yepakati-chivharo mumatanda.
An Investment gore rimwe pamberi
Iwe unogona zvakare kutora poindi poindi gore ratichangotanga. Kubudikidza nezano iri, imwe yeakanakisa mazano angave akagadzirwa neyekutanga mutsara inosarudzika index kukosha. Semuenzaniso, Ferrovial, ACS, Acciona, Acerinox uye Banco Santander. Iwo ndiwo mamwe emakosheni akakurudzirwa nevanoongorora zvemari. Nehuremu chaihwo yakakosha muIbex 35. Saka kuti nenzira iyi, iwe unogona kuteedzera mutengo wayo kuburikidza nemamwe ayo akakosha kukosha. Ehezve, ivo havazokuodza moyo iwe kana yavo shanduko iri inonakidza kwazvo gore rino.
Kune rimwe divi, mune zvimwe zviitiko ivo vakanyorwa pasi pe yakakosha mutengo wekudzikisa. Semhedzisiro yekuve kumashure kumashure mune ino uye yapfuura makore. Chinhu chakanyatsoitika mune chaiwo zvikamu, sekubhanga. Icho chiratidzo chepakutanga chekuvhura nzvimbo munzvimbo dzemunyika. Pamusoro pezvimwe zvekugadzira uye kunyange zvakakosha kufunga. Hazvishamise kuti kuchengetedzwa uku kwakasarudzika kuri muhotari yekudyara kwevakawanda vevaongorori vane mukurumbira mumisika yemari. Ichi ndicho chimwe chezvinangwa zvaunofanirwa kuteedzera muchiitwa ichi changotanga.
Zvimwe zvekushamisika muna 2018
Iko hakuna zvakare chakashata nekugovera chikamu chemari yako cherudzi urwu rwemhando dzakakosha tsika uye nezvavanogona kukuitira wana mari yakawanda. Kunyangwe mukutsinhana nekutora dzimwe njodzi mune yega yega mashandiro akaitwa. Eya, iyi zano rekudyara inogona kuverengera kuburikidza nemamwe akakosha maitiro. Kune vese avo vanomiririrwa nemakambani madiki ekushambadzira ayo anofamba nekusagadzikana kwakawanda uye kuti pamwe nekureruka anogona kuwana kudzoka pamusoro pe50% mushure mekuita kamwechete. Kunyangwe iine njodzi yekuti vane mashoma emari ayo anogona kukuvadza iwe kana uchivhura kana kuvhara nzvimbo.
Imwe yemienzaniso inoratidza maitiro aya inomiririrwa nekambani yekuterevhizheni More Mobile iyo panguva ya2017 yakaverengerwa kukomberedza 100%. Kuve mune chero ipi zvayo imwe yenyeredzi huru mune ino nguva. Ehezve, dzimwe tsika dzinotora nzvimbo mumwedzi iri kuuya, kunyangwe iyo kirasi iri mukuona kufamba uku. Mumwe weavo vanokwanisa kupa zvinopfuura kushamisika kwakanaka kubva zvino zvichienda mberi ndiEurona. Icho chidiki diki chengetedzo iyo yakanyorwa pane Imwe nzira Stock Market (MAB) iri kuda kuita kukwakuka kukuru. Kubva kumaeuro maviri ayo akanyorwa panguva ino anogona kukwira kusvika kumana kana izvo zvinotarisirwa zvakagadzirwa nevamwe vanoongorora zvemari zvasangana.
Mutsetse bhizinesi mitsara
Imwe nzira yekumisikidza kudyara mu2018 inogona kumiririrwa nemakambani anochengetedza rakazara rakabatanidzwa bhizinesi niche. Ndizvozvo kutengesa kwako kunogara kwakanaka uye mukutaura kuri pachena. Ichave iri zano rakasimba kwazvo rekudzivirira kushamisika kwakashata panguva ino. Vanogona kusawana kuonga kunoshamisa, asi zvinongobatsira kuchengetedza kuchengetedza nenzira inoshanda uye inogutsa. Mazhinji emasheya aya anotobhadhara zvikamu kune avo vagovana navo. Nemigero kubva pa3% kusvika pa8%. Iyo imwe hurongwa kuunza purofiti kubva kuequities.
Mupfungwa iyi, kumwe kwekuzvipira kukuru kunoitwa kuburikidza ne makambani emagetsi. Inomiririra mitsara yakagadzika yebhizinesi inobatsira gore rega rega. Nekuti pakupera kwezuva vanopa masevhisi anodikanwa nevagari vese. Zvinhu zvevatengi zvinogona zvakare kuverengerwa muboka iri. Kunyanya munguva dzakapamhama dzehupfumi uko kunwiwa kuchikura zvakanyanya. Naizvozvo, ivo vanogona kuve vanonakidza kwazvo kuti iwe ugone kutora zvinzvimbo kubva zvino zvichienda mberi.
Yakawanda inosara tsika mumusika wemasheya
Chekupedzisira, izvo kuchengetedzeka zvinotengesa ne dhisikaundi pamitengo yavo. Panogona kunge paine zvikonzero zvakawanda nei vakasarira kumashure mumakore apfuura. Kana ivo vachinyatso kutarisirwa zvakanaka, vanogona kuputika kumusoro chero nguva. Uye mune dzimwe nguva ine yakakosha yekuongorora mukana. Kunyangwe pamusoro pemahara pamusoro pe25%. Kuve mune zvese zviitiko zvakajeka zvinhu zvekutenga nevadiki nepakati varimi.
Sezvawaona, gore idzva iri unenge uine mikana mitsva yebhizinesi. Iwe unongofanirwa kutora mukana wenguva yakakodzera kuvhura zvinzvimbo kuti zvipo zvako zvemari zvibatsire. Kunyangwe iyo shanduko yemisika yemari isingagutsi zvachose kune zvido zvevashandisi. Iwe hauzove nesarudzo kunze kwekunge uri munzvimbo chaiyo panguva yakakodzera. Iyi ndiyo kiyi yekudyara kwakanaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Iyo yakanakisa tsika yekudyara kuchengetedza
Ibex MAB: indices nyowani pamusika weSpanish stock